Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံနှင့်အတူအရည်အသွေးမြင့် Biodegradable Straws ထုတ်လုပ်သူနှင့် Biodegradable Straws ပေးသွင်းသူ၏လမ်းညွှန်ကိုရှာပါ။
SHANG SHIEN CHENG INDUSTRY CO., LTD. တစ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့ဖြစ်ပါသည် Biodegradable Straws နှစ်ပေါင်းအတွေ့အကြုံကျော်နှင့်အတူ။ ငါတို့အားဖြင့်လုပ်သောထုတ်ကုန်စျေးနှုန်းအပြိုင်အဆိုင်နှင့်အတူအရည်အသွေးမြင့်မားကြပြီးအစဉ်အမြဲအချိန်ပေါ်ကယ်နှုတ်တော်မူ၏။ ငါတို့အသစ်ဖောက်သည်ကိုဆွဲဆောင်ရန်လစဉ်လတိုင်းထုတ်ကုန်သစ်များရှိသည်။ ငါတို့သည်ဤလောကတစ်လျှောက်လုံး 300 ကျော်ဝယ်လက်မှဂုဏ်သတင်းကိုရပြီ။ customization ကြိုဆိုသည်။ ကျနော်တို့ထဲတွင်အကောင်းပို့ကုန်စံချိန်တင်ဆုချီးမြှင့်ခဲ့ကြ Taiwan နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း။ ကျေးဇူးပြု ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ အခုချက်ချင်း။ ပိုသတင်းအချက်အလက်များကိုရှာပါ, ကျွန်ုပ်တို့၏ website ကိုကြည့်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များမဆိုနှင့်အတူရေရှည်စီးပွားရေးဆက်ဆံရေးရှိကိုစောင့်မျှော်နေကြသည်။
"ခရက်ဒစ်အားဖြင့်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုပေးရန်" ရဲ့အယူအဆနဲ့ 'oriented လူ' ၏စီမံခန့်ခွဲမှုနည်းလမ်းအပေါ် အခြေခံ. ကျနော်တို့ဖောက်သည်ထိပ်တန်းအရည်အသွေးပေးစွမ်းနိုင်သော
ထက်သာလွန်န်ဆောင်မှုနှင့်အတူ။ ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်ဆန္ဒ, ငါတို့သည်သင်တို့၏အကျိုးအမြတ်ကျွန်တော်ရှာနေကြတယ်ဆိုတာကိုဖြစ်တယ်, သင့်အဘို့အပိုပြီးစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများကိုဖန်တီးနိုင်သည်ကိုယုံကြည်! စိတ်ရင်းမှန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့အားလုံးကိုစက်ဝိုင်းရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုကြိုဆိုသည်။
ပုံစံ - PLA Single use -02
၁၀၀%biocompostable PLA ထုတ်ကုန်-ကောက်ရိုး
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သမုဒ္ဒရာထဲရှိသတ္တဝါအားလုံးသည်အနှောင်အဖွဲ့ကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရနိုင်သည်,စည်းနှောင်ခြင်း,စသည်တို့.ဤကြီးမားသောသို့မဟုတ်သေးငယ်သည့်ပလတ်စတစ်အမှိုက်များကြောင့်ဖြစ်သည်,သို့မဟုတ်အစာစားရန်ပလတ်စတစ်အမှိုက်များကိုမှားယွင်းပါ.လူသားတို့၏အမှိုက်ပြဿနာသည်သမုဒ္ဒရာအပေါ် ၀ န်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်စေသည်,ထို့ကြောင့်များစွာသောကုမ္ပဏီများသည်ပလတ်စတစ်ကောက်ရိုးများကိုမထောက်ပံ့တော့ဘဲ၎င်းတို့ကိုပိုမိုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လိုက်ဖက်သော PLA ကောက်ရိုးများဖြင့်အစားထိုးခဲ့သည်.
Biodegradable Straws ၏အကောင်းဆုံးလမ်းညွှန်ကိုဝယ်ပါ။ Biodegradable Straws ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ Taiwan တွင်ရှိသောစက်ရုံ